Iimveliso zePvc zeVenkile ye-Shoes yoMvelisi kunye noMthengisi | INPVC
Ukuxinana: 1.22-1.35 g / cm3
Isiqinisekiso: RoHS, FIKELELA, FDA, PAHS
I-PVC, i-Polyvinyl Chloride yipolymer ye-thermoplastic polymer esetyenziswa kakhulu inaliti yezihlangu. I-PVC Soles yenziwa ikakhulu ngenkqubo yenaliti ethe ngqo kodwa inokwenziwa njenge-PVC iibhodi zegwebu ezincinci zeselfowuni ezinekhalenda kunye nokusikwa. Inokuguquguquka okuhle kunye nokumelana ne-abrasion ngexabiso elinomtsalane. I-PVC soles nayo ine-insulation efanelekileyo kunye neepropathi zokumelana. Zineendleko ezifanelekileyo kwaye zinokunye nolusu.
Ngamava okufunda kunye nawokwenza imveliso kwishishini lezinto ze-PVC ngaphezulu kweminyaka engama-28, i-INPVC ibe yeyona ithandwayo Iimpawu zePole Sole Abathengisi kunye nabathumela ngaphandle, sinikezela ubungakanani obufanayo bamasuntswana aqinisekisa ukusebenza okuzinzileyo nokuqaqambileyo.
Sinikiwe Iimpawu zePole Sole Zisetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yezihlangu ze-Shoe & Outsoles, i-Slippers, iiSandals zaseLwandle, iibhutsi, iinyawo zabantwana, njl njl. Unokuyifumana le Polyvinyl Chloride Sole Compound ngokulula ngamabakala ahlukeneyo.
Ezi ndidi zilandelayo zeekhompawundi zeenyawo zezihlangu Inaliti:
* PVC granules for ziphene yokubumba insoles compact kunye outsoles
* PVC granules for ziphene yokubumba foamed ii-insoles kunye ne-outsoles
* Iigrafu ze-PVC zokubumba ngenaliti ye "density ephantsi kakhulu" enegwebu ii-insoles kunye ne-outsoles (enye indlela ye-PU foams soles)
I-INPVC inikezela uluhlu olubanzi lwe-100% yeVirgin PVC iikhompawundi ezisetyenziselwa ukuhla kweenyawo kunye nemveliso ephezulu. Izihlangu zethu zinokuxhathisa okuphezulu koomatshini, ukusebenza ngokukuko ekusebenzeni, ukuvelisa izinto ezintsha kunye nembonakalo ephezulu. Sinikezela ulwakhiwo olwenziwe ngokwezifiso kunye neemfuno ezizodwa ngokuqinisekiswa komgangatho kunye neenkonzo.
Ukusetyenziswa Izihlangu kunye neebhutsi,
Iimbadada Outsole, Iimbadada yezihlangu,
Iibhutsi zeebhokhwe zangaphantsi, izihlangu zomkhosi,
Ukhuseleko lwezihlangu, izihlangu zesikolo, i-Canvas Shoes Soles
Iyahlala. Ukuthuthuzela. Nxiba ukuxhathisa. Ukungatyibiliki
Imibala emininzi, umbala oqaqambileyo
Ubungakanani beParticle efanayo, umphezulu ogudileyo ugqityiwe
Ubunzima bokuKhanya. Microcellular Ubunzima
Ukusasazeka okugqwesileyo. Properties Ukubumbela
I-Antistatic kunye nokuQhuba kwamaBakala
Ngaba ukwishishini lokuvelisa izihlangu kuphela? Ngaba ufuna i-PVC Footwear Compound ngemibala emihle, ubunzima bokukhanya, amanqanaba aphezulu kunye nolunye ulwenziwo, ukuqinisekisa ukomelela kwesihlangu kuphela?
I-INPVC, enye ye-PVC yezihlangu ezakhiweyo zabavelisi e-China, ikhuselekile.
Okulandelayo: I-PVC Granules iikhompawundi Inaliti yeBakala yezihlangu